Titiisni Ni Huursiti Malee, Qodaa Hin Buqqiftu ! | QEERROO
Posted on November 23, 2016 by Qeerroo
5 thoughts on “Titiisni Ni Huursiti Malee, Qodaa Hin Buqqiftu !”
Gutama Hawas on November 24, 2016 at 8:45 am said:
Waal abaruun essanu nu hin gahuu waal abaruu dhissa waal taha falmadha
Gutama Hawas on November 24, 2016 at 9:01 am said:
Wagga 40 ol waaluma abara tureera.amma ammo waal abaruu dhifnee xiyyefanno keenyaa waal irratti osso hin ta,iin diina ummata keenyaa fixaa jiruu irraati osso deebifane bu,aa gudda fiduu dandeenya.
Fiikaduu on November 24, 2016 at 3:04 pm said:
yaa warra saree! dargagoon oromoo lafa kana irra akka duguugamu barbadu jecha dhaa? yoom laata kan gamnuma argatan? Biyya alaa teese komputara duba teese ijoole oromoo kan ficisiistu? Dhuufa hadharaw. Akka qabsoo kan ofii keeti qabsiistee of tuulta waggaa 40 ol. Gamnni kan argate nyaata bo’ha. Ati hanga wagga dhibba olitti seechi gana akka quraa iyyita kana beekadhu. Kanaafu nammota qabsoo kana kakaasan abaruu dhiisi waliin ta’aa wal deegara. Yoo kana hintane ummanii oromoo akka udaan sareetti isin tufa. galatooma!
Mandooyyuu on November 24, 2016 at 7:48 pm said:
Dhiifama naaf gootan. Ani Oromoo hunda ija takkaan ilaala. Oromoo kaabaa kibbaa, bahaa dhihaa dhiiga kiyya, nan jaaladha.Barreeffamni kun garuu, hedduu na mufachiise, na aarses. Barreefamni kun keessattuu ummata Oromoo arrabsuuf , keessa Oromoo Arsii Arrabsuuf kan barraayee dha. Tiisisni Jettee kan arrabsuu kajeelte eennuun fa’a jechuu barbaadde? Oromoon isin qofa kan qabsaayu kan Awurooppaa keessa deemaa jiraattan eennu?Arsiin goota akkuma Oromoota biroo,goota akka ta’e wallaaltee? Ummata Oromoo kutaa ofii keessatti dhalattee aanaa kankee kan ofii beektu qofa maaliif maqaa dhoofta? Gadhee ta’uu kan kee agarsiisa. Gaafa Oromoon Amboo Lolu Arsiin yoom kan callise agarte. Maaliif ABO ofuma callaa goota. ABO kan dadhabsiisee miila irraa fixee kan jedhe isin warra kijibaan Oduu callaan lolleerra jettanii dha. Ani gama kiyyaa kan nu Abdannu 1faa Rabbi, kan itti aanu, Qeerroo fi WBO. Isin garuu warri ABO ABO jedhaa fallaa sababa ABO n kaleessa dhaabateef hojjettan mee ganda tokko iyyuu bilisoomsuu hin dandeessan. Ganna 25 keessatti kijiba galmeessuu malee dhugaan keessan meeti.
Abdiin ummata Oromoo, Qeerroo fi WBO qofa, isin warri kijibaan jiraatuu miti.
shekooblog on November 25, 2016 at 3:14 pm said:
Ashaam,ilimman oromoo akkam jirtaan hundii kessanuu? Egaan jee bodaa , akkasumma addatii qeerroo bilisummaa oromoo fi WBO ..Ashaam ,Ashaam egaan jee bodaa , dhammsan anii qabuu warreen olloo fii shirra fii abarrasa Addii bilisumma oromoo fi qeerroo bilisummaa oromoo irratii offaa jiruu hundiinuu diinaan ykn moottummaa wayyaanetiin illalchaa addaa hin qabnii . kan uummanii oromoo gaddii jabbessee ballalleefataa.,Qeerroo bilisumma biyyaa kessaa falmaa hadhooytuu funyaan diina jalaa godhaa jiraa , finciilaa xumuraa gabrummaa gollabaa itti godhuuf. hatuu mootumman wayyanee ykn TPLF fi sareen issan ykn gantuu fi galtuu warreen dasiphorraa wajjiin ta’uu olloola fi abarrasaa ABO fi Qeerroo oromoo irratii xaxaa jiraan kun yoomiiyuu galmaa hin geyuuf. har’aas te’ee boruus addii bilisummaa oromoo ykn ABOn dhaaba uummataa oromotii ,WBOn gacheena ummataa oromotii,Qerroon abdiif ummataa oromoot.GADAAN GADAA BILLISUMMAAT , INJIIFAANOO UUMMAATAA OROMOTII.
2016-11-25 15:16 GMT+04:00 QEERROO :
> Mandooyyuu commented: “Dhiifama naaf gootan. Ani Oromoo hunda ija takkaan > ilaala. Oromoo kaabaa kibbaa, bahaa dhihaa dhiiga kiyya, nan > jaaladha.Barreeffamni kun garuu, hedduu na mufachiise, na aarses. > Barreefamni kun keessattuu ummata Oromoo arrabsuuf , keessa Oromoo Arsii > Arra” >